Nchekwa na Mfe Method Iji kachapụ iPad Akaụntụ
Nchekwa na Mfe Method iji Hichapụ iPad Akaụntụ
Mgbe ụfọdụ, o nwere ike otú ime ka ị na-ahụ onwe gị mkpa ka ihichapụ gị iPad akaụntụ. E nwere ike ịbụ iche iche ihe na fir ya. Ị nwere ike na-eche nke na-ere gị iPad ma ọ bụ ị na-adịghị mkpa na akaụntụ ọzọ. N'agbanyeghị ihe kpatara ya bụ, i nwere mfe ụzọ ndị i nwere ike ime otú ahụ.
Ebe a, anyị ga-depụta dị iche iche nzọụkwụ nke ga-enyere gị ịga nke ọma na nzube gị nke ihichapụ na akaụntụ gị Apple ngwaọrụ.
Nzọụkwụ ka ihichapụ akaụntụ email iPad
E were ị gbanwere gị email ma ọ bụ ọbụna mgbe ị na-yiri ka mie gị email, i nwere ike ka ihichapụ na akaụntụ gị iPad. Lee ndị dị mfe nzọụkwụ nke ga-ekwe ka ị nweta na.
• Mbụ niile, gbanye gị iPad na isi na 'Ntọala' akara ngosi.
• Ugbu a, hover n'elu ka 'Mail, kọntaktị na kalịnda' nhọrọ.
• Na nri n'akụkụ aka, ị ga-ndepụta nke dị iche iche akaụntụ email na e kegide gị iPad.
• Họrọ akaụntụ na ị chọrọ ka ihichapụ ma pịa 'Nhichapụ' button.
• Ị ga-enweta a ozugbo arịọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ akaụntụ.
• Kwenye gị edinam site na ịpị 'Nhichapụ' ọzọ.
• Cheta, ihichapụ akaụntụ email ga-ihichapụ ozi gị iPad na e wee kegide ha akaụntụ gị.
Nzọụkwụ ka ihichapụ iCloud akaụntụ iPad
Na ị ga naanị họrọ ihichapụ gị iCloud na akaụntụ gị iPad mgbe ị na-nnọọ n'aka na ị chọrọ ime otú ahụ. Ihichapụ akaụntụ gị ga-ihichapụ ọdịnaya nke bụ akụkụ nke gị iCloud akaụntụ. Ị ga-Otú ọ dị-kpaliri ka ma ma ọ bụ na ị chọrọ anọgide na-adị faịlụ.
Nzọụkwụ atụle bụ maka ndị ọhụrụ version.
• Kwafee 'Ntọala' na gị iPad.
• N'okpuru 'Ntọala', hover ka 'iCloud' na pịa ya.
• Head ka nnọọ ala na ị ga-ahụ otu nhọrọ akpọ 'pụọ'. Pịa na na.
• Mgbe ị na-enweta on 'pụọ', ị ga-na-anya ozi, na-akwadokwa gị edinam. Pịa 'pụọ' ọzọ
• Ugbu a, ị ga-ịnọ ọzọ anya ozi maka nhichapụ nke akaụntụ, ị ga-jụrụ dị ka ihe a ga-eme ka iCloud safari data na Ndi ana-akpo.
• Ị nwere ike ma na-ahọrọ na-edebe ha gị iPad ma ọ bụ ihichapụ ha dabeere na n'elu mmasị gị.
• Ị mkpa ịbanye gị iCloud paswọọdụ wee na i nwere ike gbanyụọ 'Chọta My Ngwaọrụ'
• Chere ruo oge ụfọdụ ma mgbe ahụ, gị iPad akaụntụ ga-aga nke ọma ehichapụ gị iPad.
-Eso ndị a ga-enyere gị hichapụ gị iPad akaụntụ ọma. Na ndị okenye na nsụgharị, e nweghị ihe ịrịba ama si nhọrọ dị ka ị pụrụ nanị pịa 'Hichapụ Akaụntụ' na gị iCloud akaụntụ ga-ewepụ.
Olee ka ihichapụ iPad akaụntụ na-enweghị paswọọdụ?
Mgbe ụfọdụ, ọ pụrụ otú ime ka ị pụrụ ichefu paswọọdụ gị na ị ka na-achọ ka ihichapụ gị iPad akaụntụ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, i nwere ike na-ada azụ Wondershare SafeEraser dị ka ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ngwaọrụ.
Download ikpe mbipute nke Wondershare SafeEraser inwe a na-agbalị!
Ndị na-abụghị maara ihe ngwá ọrụ a nwere na-enye nwere ike a lee anya na-esonụ nkọwa.
• Ọ na-enyere na-adịgide adịgide ihichapụ data nke pụtara na ọ na-enye enwekwukwa nche etoju.
• Ọ na-enye gị ohere iji kpamkpam ihichapu ngwaọrụ gị.
• Ọ na-akwado ọtụtụ nke dị iche iche faịlụ formats dị ka ọ bụghị nanị okosobo foto na vidiyo ma nwekwara ike ihichapụ oku na ndekọ, ozi, ibe edokọbara, Gburu na ndị ọzọ.
• Ọ na-enyere na gwakwara elu ohere na gị iPhone na iPad.
• Ọ gbapụrụ ọsọ gị ngwaọrụ site na-ekpocha na junk faịlụ.
Ugbu a na ị maara ihe na-atụ anya n'aka na ngwaọrụ a, anyị ga-atụle isi ihe nzọụkwụ na-eso n'ihi ihichapụ gị iPad akaụntụ ọbụna mgbe ị na-enweghị aidia nke ihe paswọọdụ bụ.
• Download Wondershare SafeEraser ngwá ọrụ na gị na PC na ẹkedori ya.
• Ugbu a, jikọọ gị iPad gị na kọmputa na iji eriri USB.
• Ozugbo iPad jikọọ, ị ga-ya na aka-ekpe-n'akụkụ nke Nchekwa nchicha ngwá ọrụ.
• Tupu ị n'ihu na nzọụkwụ, ị chọrọ ịga gị iPad ígwé ojii na ego ma ma ọ bụ gị 'Chọta My iPad' na-nyeere. Ọ bụrụ na ọ agbanwuru ha, na mkpa ka ị gbanyụọ ya.
• Na usoro, pịa na nhọrọ, 'Ihichapu All Data'.
• Ị ga-ahụ a ọhụrụ window ebe mkpa ka ị pịnyere 'Hichapụ' na ozugbo igbe n'ịkwado nzọụkwụ.
• Chere ruo oge ụfọdụ ruo mgbe nhichapụ zuru ezu.
• Ị ga-ahụ a ozugbo na-ekwu na nhichapụ e dechara.
Nzọụkwụ ndị a na-n'aka-enyere gị aka hichapụ gị iPad akaụntụ ọbụna na-enweghị a paswọọdụ.
Mfe Nyefee Photos si iPad ka Computer
Olee otú iji tọghata FLV ka The New iPad (iPad 3)
> Resource> iPad> Nchekwa na Mfe Method Iji kachapụ iPad Akaụntụ